Madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho ku tagey maanta magaalada Asmara ee dalka Eritrea… – Hagaag.com
Madaxweyne Farmaajo ayaa booqasho ku tagey maanta magaalada Asmara ee dalka Eritrea…
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mohammed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa booqasho ku tagey magaalada Asmara ee dalka Eritrea subaxnimadii maanta.
Madaxweyne Farmaajo ayaa halkaas ku tagay booqasho shaqo oo qaadan doonta 2 maalmood, waxaana si diiran u soo dhoweeyey Madaxweyne Isaias Afwerki markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Asmara.
Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadli doona horumarka xiriirka labada dal, tallaabooyinka sii xoojinta iyo sidoo kale horumarka gobolka & isbeddellada.
Madaxweyne Mohammed Abdullahi Mohammed & wefdigiisa ayaa sidoo kale booqan doona goobo iyo mashaariic horumarineed oo kala duwan.
Farmaajo ayaa soo gabagabeeyay socdaal uu ku tagay dalka Koonfurta Sudan halkaas oo uu uga qeyb galay munaasabadda Dhaqan-gelinta Heshiiska nabadeed ee u dhaxeeya Dowladda Sudan iyo Kooxaha hubeysan ee Galbeedka iyo Koonfurta.
Waa markii saddexaad uu madaxweyne Farmaajo booqasho ku tagay Eritrea, booqashadii ugu dambeysay waxay ahayd bishii Janaayo ee sanadkaan, markaas oo madaxweynuhu u aaday safar khuseeyay ka miro-dhalka tallaabooyinka isu furfurnaanta dhanka diblumaasiyadda iyo isu-socodka bulshada Gobolka, mideynta qorsheyaasha lagu wiiqayo argagixisada iyo xal u helista caqabadaha ku xeeran Iskaashiga dalalka Gobolka.